किन दाह्री पालेको केटा संग आकर्षित हुन्छन सुन्दर केटीहरु ? यस्तो छ कारण – जान्नुहोस अचम्म लाग्ने तथ्य – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/किन दाह्री पालेको केटा संग आकर्षित हुन्छन सुन्दर केटीहरु ? यस्तो छ कारण – जान्नुहोस अचम्म लाग्ने तथ्य
किन दाह्री पालेको केटा संग आकर्षित हुन्छन सुन्दर केटीहरु ? यस्तो छ कारण – जान्नुहोस अचम्म लाग्ने तथ्य
काठमान्डौ : आजभोलीका तन्नेरीहरुमा दाह्री पाल्ने फेशन नै भएको छ। दाह्री पाल्नेहरुको फेसबुकमा एउटा ग्रुप नै छ ‘दाह्री ग्यांग’ नामको। दाह्री पाल्दा परिपक्व देखिने साथमा युवतीहरु आकर्षित हुने दाह्री पालकहरुको विश्वास रहेको छ। दाह्री पाल्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, भारत लगाएत पश्चिमा देशहरुमा पनि उत्तिकै प्रचलित छ। केटीहरूलाई दाह्री नपालेका भन्दा दाह्री पालेका केटा बढी मनपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
हालै गरिएको एक अनुसन्धानले केटीहरू ट्रिम दाह्री भएका केटाहरु तर्फ आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ । अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार केटीहरूलाई दाह्रीका कारण केटाहरूको बलियो इमेज बन्ने गरेको भान हुन्छ ।
हल्का दाह्रीवाला केटाहरू देख्दा धेरै केटीहरूको नजर केहीबेरका लागि उनीहरूमै अडिने गरेको अध्ययन बताउँछ । दाह्री भएका केटाहरू धेरै नै रोमान्टिक हुने भएकोले उनीहरूसँग साथ बिताउन केटीहरूलाई एकदमै मनपर्ने पनि अनुसन्धानले बताएको छ ।
उनीहरूको ‘क्लासिक’ लुक्समा पनि प्राय केटीहरुको आँखा रहने गरेको देखिएको छ । हरेक केटी आफूले मन पराएको केटा परिपक्क होस भन्ने चाहाना राख्ने भएकोले पनि उनीहरुलाई दाह्री राख्ने केटाहरु धेरै परिपक्क हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।
यस्ता केटाहरुप्रति केटीहरु बढी नजिक हुने गर्छन् ।दाह्री हुने केटाहरु मर्द हुन्छन भन्ने केटीहरूको मनोविज्ञानले बताएको अध्ययनमा जनाइएको छ । आजकल दाह्री पालेका केटाहरु केटीहरुलाई हट लाग्न थालेको अध्ययनमा बताइएको छ ।
त्यतिमात्रै हैन केटीहरूलाई क्लिन सेभ गरेका भन्दा दाह्री पालेका युवकले चाँडै नै आर्कषण गर्ने गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । केटीहरुकोले क्लिन सेभ गरेका केटाभन्दा हल्का दाह्री पालेका केटा बढी ह्यान्डसम मान्ने गरेको समेत बताइएको छ । युवतीहरुलाई केटाको दाह्री मनपर्नुका केही कारण यस्ता छन्।
बलियो इमेज-केटीहरुका अनुसार दारीका कारण केटाहरुको बलियो इमेज बन्ने गर्छ । हल्का दारीवाला केटाहरु देख्दा धेरै केटीहरुको नजर केही बेरका लागि उनीहरुमै अडिने गर्छ ।
केटीहरुलाई लाग्छ दारी भएका केटाहरु धेरै नै रोमान्टिक हुने गर्छन् । उनीहरुसँग साथ बिताउन केटीहरुलाई एकदमै मनपर्छ ।
मर्दको निशानी-धेरै युवतीहरुलाई लाग्छ दारी हुने केटाहरु मर्द हुन् । यस विषयमा किताबी अध्ययन गरेका कारण पनि उनीहरु यस बिच बलियो सम्बन्ध रहेको उनीहरु बताउने गर्छन् । कुनै समय क्लिन सेभ गरेका केटाहरु केटीहरुलाई आजकल भने दारी पालेका केटाहरु हट लाग्न थालेको छ ।तस्विर : भ्लगर सिसन बनिया र पुर्व मिसनेपाल शृंखला खतिवडा। श्रोत: गुगल – हिमाली पत्रिका बाट